Ihe ngosi FMUSER RDS-Encoder gosipụtara na nzukọ nzukọ RDS - CZH / Fmuser Fm Transmitter China Supplier Kpọtụrụ: lanyue whatsapp: +86 13602420401 SKYPE: lanyue99991
home » News » FMUSER RDS-Ihe ngosipụta gosipụtara na Nzukọ RDS Forum
FMUSER RDS-Ihe ngosipụta gosipụtara na Nzukọ RDS Forum
:Bọchị: 2018-07-26 / Atiya: News, Uncategorized
Ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri atọ na ntanetị redio FM Data Sistemu (RDS) na-enye ndị mgbasa ozi FM ikike ịnyefe ndị na - ege ntị data dijitalụ. Etolite na Europe, RDS adịla ngwa ijide US na mbido, mana iwebata ọrụ redio dijitalụ na mbido afọ 2000 gosikwara mmalite dị ukwuu na ojiji RDS iji weta aha abụ na oti egwu na ozi metụtara okporo ụzọ RDS -nweta ndị nnabata. A na-eme atụmatụ na enwere redio karia 5 nke RDS kwadebere n'ụwa niile.
Ezie na oke uru, mgbaama RDS nwere oke oke na ikike data, na RDS Standards (IEC 62106 na NRSC-4-B) gụnyere ọtụtụ njirimara ndị bịara bụrụ oge ihe na-adịghịzi mkpa. Nyere ihe ndia, RDS Forum, ndi otu European-based based development development nke dikwa maka mbido mbu na ndozi onodu nke IEC nke Ego, kwenyere na nzuko ya nke afo n’onwa Julai nke 2014 ịmalite itule mmelite na RDS na ga-eleba anya n'okwu ndị a. Nzukọ nzukọ na-aga n'ihu iji kwalite atụmatụ a na-akpọ “RDS2” bụ nke emere na Budapest na Nọvemba 2014 nke butere “akwụkwọ ọhere” na-akọwa usoro RDS2 ahụ chọrọ.
Nzukọ RDS nwere nzukọ ezumike ya na afọ 2015, ma gosipụtakwa usoro RDS2 nke puru iche. Ọzọkwa, mgbe ọ tụlechara uru ndị usoro ihe ọhụrụ a na-eweta, RDS Forum mepụtara Otu Na-arụ Ọrụ na ebumnuche nke imelite RDS Standard iji tinye RDS2. E nyere nkọwa dị mkpirikpi banyere RDS2 ebe a:
RDS2 na-enye ikike ibufe ihe dị n'okpuru abụọ, abụọ ma ọ bụ atọ yana, yana otu ihe ahụ, obere ihe RDS n'okpuru. Ọ bụ ezie na ihe ọdụdụ dị n'okpuru 57 kHz (n'etiti ọdụ ụgbọ ala FM), ihe atọ dị n'okpuru na-elekwasị anya na 66.5, 71.25 na 76 kHz (dị ka nke dị n'okpuru ala 57 kHz, ihe ala ọhụrụ a bụ nke ọ bụla na-ebugharị site na pilot 19 kHz) . Egosiputara na onu ogugu di n'okpuru bu nkata di egwu nke RDS na RDS2 ihe ndi n’aru ugbo ala 19 kHz (ibupute a sitere na usoro nlere gosiputara RDS Forum);
Emebere atụmatụ RDS2 ahụ sitere n'aka Attilla Ladanyi, T&C Holdings (Germany) na Peter Jako, Redị Hungarian. Ngwa mgbasa ozi demo na-arụ ọrụ na ngosipụta na Nzukọ nke afọ a bụ nke Allen Hartle na Seth Stroh, (USA), ma dabere n'elu ikpo okwu “JumpGate2” nke Jump3Go; Hendrik van der Ploeg, Catenaand Joop Beunders, Macbe (Netherlands) mepụtara ngwanrọ nnabata nke demo. E gosipụtara foto nke Mbido ngosi dị n'okpuru. Rịba ama na nke a bụ ikike dị ala nke “ikuku”.
A ga-eji obere ihe nrụpụta RDS2 mee ihe naanị iji nyefee ihe “Open Data Application” (ODA). Na mbụ etinyere dịka akụkụ nke usoro RDS ketara, a na-eji ODA mee ihe iji kwado ọtụtụ ọrụ data, ma ụzọ bụ isi ụzọ ọrụ ọhụrụ si eji RDS. Ebe ọ bụ na enwere ike ịtọhapụ obere ihe ndị ọzọ a na - ebugharị ụdị data RDS dị ka Koodu Mmemme (PI) na Mmemme Mmemme (PS), ikike data n'oghere nke RDS2 (maka “ịkwụ ụgwọ”) dị na ya. ihe dị ka ugboro 10 ruo 20 (ma ọ bụ karịa) nke ihe ahụ dị na obere ihe RDS Rụpụtara naanị.
Enyere ntụnyere ikike nke data na tebụl dị n'okpuru ebe a, atụnyere ikpe atọ: Ọnọdụ 0 gosipụtara ike (na ọnụego bit dị mma) nke ihe ntinye RDS nke nwere ebe 10% na-eji maka ịnyefe data ODA (nke a bụ ihe nlere maka iji taa); Ikpe 1 ọzọ na-anọchi anya ihe nrụpụta RDS nke ihe nketa mana oge a na 70% ODA na-akwụ ụgwọ, na-egosi nnweta ngụkọta ODA kachasị site na iji akara RDS Legacy; n'ikpeazụ, Case 3 na-egosi nkwalite 30 ugboro na ikike nkwụnye ụgwọ ODA mgbe ejiri ihe atọ RDS2 jiri data 100% ODA (na-eche na enweghị data ODA na obere ihe nketa; nke a bụ ikpe a chọrọ maka RDS2). Maka tebụl a, “STREAM 0” na-ezo aka na iyi data ejiri mee ka obere ihe nchekwa RDS kọọ mgbe “STREAMS_1-3” na-ezo aka na iyi data nke na-agbagharị ihe atọ RDS2 atọ.
Ufodi ngwa ohuru nke RDS2 choro ma kwado ya nke gunyere ikike ibughari akara ngosi ugboala na iji udiri UTF-8 atọrọ iji kwado ogologo ederede Text na Mmemme Mmemme. Ugbu a, ngwa ndị a anaghị akwado RDS n'ihi ike dị nta nke sistemu dị ka esiri gosipụta ya na tebụl dị n’elu.
Na mmecha nke ngosipụta ihe ịga nke ọma na ndị otu RDS Forum na nkwekọrịta na RDS2 kwesịrị ịbanye na Standardkpụrụ, ọ bụ ọrụ ugbu a RDS Forum Work Group hiwere ọhụrụ iji zụlite nkọwa zuru oke maka RDS2, yana mgbakwunye na ịchọpụta akụkụ nkebi nke ụkpụrụ dị adị enwere ike iwepu. Onye isi nchịkwa NAB, Onye Nlegharị Ọhụrụ David Layer, onye sonyere na nzukọ RDS Forum nke afọ a dị ka onye njikọ maka National Radio Systems Kọmitii (NRSC, ndị NAB na ndị ọrụ NAB na ndị ọrụ eletrọnik ahịa) ga-esonye na RDS Forum Work Group , ọ ga-arụkwa ọrụ iji hụ na ndakọrịta nke European Standard emelitere yana NRSC nke RDS Standard (NRSC-4-B, United States RBDS Standard).
Na ọrụ mmepe dị na ọkwa, RDS Forum na-ezube ọrụ na ịchọpụta "ngwa ndị na-egbu egbu" maka RDS2, yana ịchọpụta mgbawa na ndị na-anabata ndị ahịa nwere mmasị n'ịzụlite ngwaike nke ga-akwado nkwalite ndị a na usoro RDS. Ndi ozo gha akwadoro ka ndi oru mgbasa ozi gha mee ka ha mata banyere oru a, ma choputa ntinye ha na ntinye aka n’usoro ochichi na ngwa mmepe.
A ga-egosipụta FMUSER RDS-Encoder na 2018 adịghị anya.
«Nke gara aga: Uzo esi aga na Donne e Redio na Africa
Ntinye aka FMUSER FSN5.0 500W 600W FM Nwere Ntinye ihuenyo AUX Cover 30-40km Radio Station Professional abụọ Bay Antenna KIT :Osote "
jon 2018/08/20 na 16:46:40
ị maara ole ụgbọ RDS nyeere aka na United States?
StereoHörer 2019/09/06 na 06:19:03
Ist RDS2 für ECHTE OIRT Freqenzen (kwa zB 66,17; 67,94; 71,45; 72,38 MHz) und auch solche mit dem PolarModulations-Stereo-Verfahren (Nicht Pilotton!) Andwendbar?